Ndị ahịa na-echekarị maka mgbasa ozi mmekọrịta dị ka ụzọ ọzọ iji kwalite ma ọ bụ kpọsaa ngwaahịa na ọrụ ha. Ihe ha anaghị amatakarị bụ ike ijikọ mgbasa ozi mmekọrịta dịka ọwa mmekọrịta nke na-enye nzaghachi ma nwee ike ikwughachi mbọ ị na-agba n'ahịa. Ndị na-ere ahịa ama ama ejirila ọdịnaya nke ọdịnaya na usoro mgbasa ozi akwụ ụgwọ iji ruo ndị ọrụ ekwentị. Mgbasa mgbasa ozi bụ 41% nke ego Facebook na Facebook nwere 16% ahịa nke ahịa ụwa
Social, Obodo, Mobile. Utu aha maka nke ahụ bụ SoLoMo na ọ bụ atụmatụ na-echekwa ọtụtụ uto na ụlọ ọrụ ahụ. Ndị na-elekọta mmadụ na-eme njem site na nkwalite na ịkekọrịta, ime obodo na-eme ihe mgbe ndị ọrụ na-achọ ndị na-ere ahịa na mpaghara ha, na mkpanaka na-anya mkpebi nzụta na na mpụga ụlọ ahịa ahụ. Agbanyeghị na ọnụego ntụgharị ọnụahịa dị ala maka ndị ọrụ ama ama, ọnụ ọgụgụ ndị ahụ anaghị agwa akụkọ ahụ dum, ebe ngwaọrụ mkpanaka na-emetụta oke
Ọ bụrụ na enweghị m ihe ọ bụla m ga-ede banyere na blọọgụ m, m na-eme ụfọdụ nchọgharị ma chọta ụfọdụ njikọ dị egwu ma kesaa ndị ahụ. Ọ bụrụ na ị na-ewepụta oge ịlaghachi na saịtị m ma ọ bụ denye aha na ndepụta m, Achọrọ m ijide n'aka na anaghị m egbusi oge gị site na ọkara ịnwa ọkwa post. N'agbanyeghị mgbalị ndị m na-eme, ụfọdụ n'ime post m bụ ndị na-egbu egbu na ndị ọzọ na-elebara anya. Mgbe ịde blọgụ ruo ọtụtụ afọ ugbu a,
Ma ị bụrụ onye na-ede blọgụ ma ọ bụ nwee blọọgụ nke gị, otu n'ime ihe uto nke blọọgụ gị ga-adabere n'ike gị iru ndị na-agụ akwụkwọ ọhụrụ na-amaghị na blọọgụ gị dị. M na-eme nke a site na ọtụtụ usoro… iji dị mkpa ha bụ: Na-ekwu maka blọọgụ ndị ọzọ, ọkachasị mgbe ha nọ n'otu ụlọ ọrụ. A na m achọta ha site na Alerts Google, Blogsearch na Google, na Technorati. Ana m ebipụta RSS m